အိန္ဒိယ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်အများစုကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနေ
20 သြဂုတ်၊ 2021
မြန်မာနဲ့နယ်ချင်းကပ် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်း မီဇိုရမ်ပြည်နယ်။
စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနယ်စပ် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သွားတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသည် အများစုကို ပြည်နယ်အစိုးရ အစီအစဉ်နဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးထားကြောင်း မီဇိုရမ်အခြေစိုက် ချင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့က ပေးပို့တဲ့ ဒီသတင်းကိုကိုရန်နိုင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့် မြန်မာနယ်စပ်ကို အိန္ဒိယအစိုးရဘက်က လုံခြုံရေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ် လုပ်ဆောင်ထားပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ အိန္ဒိယ မီဇိုရမ်ဘက်ခိုလှုံဖို့ ရောက်ရှိလာသူတွေ ဆက်တိုက်ရှိနေပါတယ်။ အစောပိုင်းကတည်းက ရောက်ရှိနေတဲ့ မီဇိုရမ်ထဲက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ပြည်နယ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ့ပေးနေတာပါ။ အကြမ်းဖျင်းသိထားရသလောက် မြန်မာဒုက္ခသည် အားလုံးနီးပါးကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေးထားပြီလို့ မီဇိုရမ်အခြေစိုက် မြန်မာဒုက္ခသည် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး ကော်မတီရဲ ဒုဥက္ကဋ္ဌ Pu. Sawm Than Ga က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“အခုကတော့ မီဇိုရမ်မှာ ၂၀,၀၀၀၊ ၂ သောင်းကျော်ကျော်တော့ ရှိမယ်ထင်တယ်နော်၊ ကာကွယ်ဆေးကတော့ မနေ့က အကုန်လုံး ထိုးပြီးပြီ။ ကျနော်တို့ Aizawl ( အိုင်ဇော) က သူတွေက နောက်ဆုံးမှာထိုးတာ မနေ့က။ အကုန်လုံး ထိုးပြီးကြပြီနော့။”
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲမှာ မြန်မာဒုက္ခသည် ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်၊ မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တိမ်းရှောင်ခဲ့သူက ၃၀,၀၀၀ လောက်ရှိကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စာရင်းကိုကိုးကားပြီး မီဇိုရမ်အခြေစိုက် ချင်းလူ့အခွင့်အရေအဖွဲ့ CHRO ရဲ့ ဒုတိယအမှုဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆလိုင်းဇာအုပ်က ပြောပါတယ်။ တရားဝင်စာရင်းအရ မြန်မာဒုက္ခသည် ဘယ်လောက်အရေအတွက်ကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးတယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ပေမဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ အစီအစဉ်မှာတော့ ပါဝင်ကြောင်း သူက ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့တာပါ။
“သူတို့ ဒီမြို့တွေ ရွာတွေမှာ ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကို့ ဆေးထိုးပေးဖို့တော့ သူတို့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။ သူတို့ ကာကွယ်ဆေး လုံလောက်မှုအပေါ်မှာလည်း မူတည်တာကိုး။ ဦးစားပေးထိုးတာကတော့ သူတို့မီဇိုရမ် ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကို ဦးစားပေးပြီးထိုးတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လုံလောက်မှု ရှိလို့ရှိရင် ရပ်ကွက်အလိုက် အဲဒါကိုသူတို့ အသစ်ရောက်လာတဲ့သူ ခိုလှုံဖို့ရောက်လာတဲ့ သူတွေကို သူတို့ ထိုးပေးလေ့ရှိတယ်။”
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်က တချို့ဒေသတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ lockdown ချထားသလို မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်ကလည်း မိုးတွင်းကာလ ရာသီဥတုဆိုးတဲ့အတွက် အခုနောက်ပိုင်း ခိုလှုံဖို့ ထွက်ပြေးလာသူတွေ အတွက်တော့ လမ်းခရီးမှာ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ထဲမှာ ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ တချို့ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ကလေးတွေ ကျောင်းတက်နိုင်ဖို့လည်း အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ကူညီနေပါတယ်။ ဒေသအခြေစိုက် Zonet သတင်းအရတော့ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်က ကျောင်းတွေမှာ မြန်မာကလေး ၁၇၀ ကျော် ကျောင်းတက်နေပြီလို့ ရေးသားထားပါတယ်။
အိန်ဒိယ၊ မီဇိုရမျပွညျနယျရောကျမွနျမာဒုက်ခသညျအမြားစုကို ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးပေးနေ
စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျပိုငျး အိန်ဒိယနယျစပျ မီဇိုရမျပွညျနယျထဲ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျ သှားတဲ့ မွနျမာဒုက်ခသညျ အမြားစုကို ပွညျနယျအစိုးရ အစီအစဉျနဲ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးနှံပေးထားကွောငျး မီဇိုရမျအခွစေိုကျ ခငျြးအရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးတှကေ ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။ ရနျကုနျမွို့က ပေးပို့တဲ့ ဒီသတငျးကိုကိုရနျနိုငျက တငျပွပေးထားပါတယျ။
ကိုဗဈကူးစကျမှုတှကွေောငျ့ မွနျမာနယျစပျကို အိန်ဒိယအစိုးရဘကျက လုံခွုံရေးတငျးတငျးကပျြကပျြ လုပျဆောငျထားပမေဲ့ မွနျမာပွညျကနေ အိန်ဒိယ မီဇိုရမျဘကျခိုလှုံဖို့ ရောကျရှိလာသူတှေ ဆကျတိုကျရှိနပေါတယျ။ အစောပိုငျးကတညျးက ရောကျရှိနတေဲ့ မီဇိုရမျထဲက မွနျမာဒုက်ခသညျတှကေို ပွညျနယျအစိုးရအစီအစဉျနဲ့ ကိုဗဈရောဂါ ကာကှယျဆေးထိုးနှံ့ပေးနတောပါ။ အကွမျးဖငျြးသိထားရသလောကျ မွနျမာဒုက်ခသညျ အားလုံးနီးပါးကို ကာကှယျဆေး ထိုးနှံပေးထားပွီလို့ မီဇိုရမျအခွစေိုကျ မွနျမာဒုက်ခသညျ ကူညီကယျဆယျရေး ကျောမတီရဲ ဒုဥက်ကဋ်ဌ Pu. Sawm Than Ga က ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“အခုကတော့ မီဇိုရမျမှာ ၂၀,၀၀၀၊ ၂ သောငျးကြျောကြျောတော့ ရှိမယျထငျတယျနျော၊ ကာကှယျဆေးကတော့ မနကေ့ အကုနျလုံး ထိုးပွီးပွီ။ ကနြျောတို့ Aizawl ( အိုငျဇော) က သူတှကေ နောကျဆုံးမှာထိုးတာ မနကေ့။ အကုနျလုံး ထိုးပွီးကွပွီနော့။”
မီဇိုရမျပွညျနယျထဲမှာ မွနျမာဒုက်ခသညျ ဘယျလောကျရှိနပွေီလဲဆိုတာ အတိအကြ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။ ဖဖေျောဝါရီ ၁ ရကျ၊ မွနျမာပွညျမှာ စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ တိမျးရှောငျခဲ့သူက ၃၀,၀၀၀ လောကျရှိကွောငျး ပွညျနယျအစိုးရရဲ့ စာရငျးကိုကိုးကားပွီး မီဇိုရမျအခွစေိုကျ ခငျြးလူ့အခှငျ့အရအေဖှဲ့ CHRO ရဲ့ ဒုတိယအမှုဆောငျ ညှနျကွားရေးမှူး ဆလိုငျးဇာအုပျက ပွောပါတယျ။ တရားဝငျစာရငျးအရ မွနျမာဒုက်ခသညျ ဘယျလောကျအရအေတှကျကို ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးပေးတယျဆိုတာ မပွောနိုငျပမေဲ့ ပွညျနယျအစိုးရရဲ့ အစီအစဉျမှာတော့ ပါဝငျကွောငျး သူက ဗှီအိုအကေို ပွောခဲ့တာပါ။
“သူတို့ ဒီမွို့တှေ ရှာတှမှော ဝငျရောကျလာတဲ့သူတိုငျးကို့ ဆေးထိုးပေးဖို့တော့ သူတို့စီစဉျထားတာရှိတယျ။ သူတို့ ကာကှယျဆေး လုံလောကျမှုအပျေါမှာလညျး မူတညျတာကိုး။ ဦးစားပေးထိုးတာကတော့ သူတို့မီဇိုရမျ ပွညျသူ၊ ပွညျသားတှကေို ဦးစားပေးပွီးထိုးတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့လုံလောကျမှု ရှိလို့ရှိရငျ ရပျကှကျအလိုကျ အဲဒါကိုသူတို့ အသဈရောကျလာတဲ့သူ ခိုလှုံဖို့ရောကျလာတဲ့ သူတှကေို သူတို့ ထိုးပေးလရှေိ့တယျ။”
မီဇိုရမျပွညျနယျက တခြို့ဒသေတှကေို ကိုဗဈကာကှယျဖို့ lockdown ခထြားသလို မွနျမာ-အိန်ဒိယ နယျစပျကလညျး မိုးတှငျးကာလ ရာသီဥတုဆိုးတဲ့အတှကျ အခုနောကျပိုငျး ခိုလှုံဖို့ ထှကျပွေးလာသူတှေ အတှကျတော့ လမျးခရီးမှာ အခကျအခဲရှိပါတယျ။
မီဇိုရမျပွညျနယျထဲမှာ ပွနျဖှငျ့လိုကျတဲ့ တခြို့ကြောငျးတှမှော မွနျမာဒုက်ခသညျတှရေဲ့ ကလေးတှေ ကြောငျးတကျနိုငျဖို့လညျး အရပျဘကျအဖှဲ့တှကေ ကူညီနပေါတယျ။ ဒသေအခွစေိုကျ Zonet သတငျးအရတော့ နှဈနိုငျငံ နယျစပျက ကြောငျးတှမှော မွနျမာကလေး ၁၇၀ ကြျော ကြောငျးတကျနပွေီလို့ ရေးသားထားပါတယျ။
အမေရိကန် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထပ်ထိုးမယ့် အစီအစဉ်ဝေဖန်ခံရ